Allgedo.com » Swedan oo Mar kale Ciidamo u soo Diraysa Xeebaha Soomaaliya
Barlamanka dowladda Sweden ayaa eegaya suurta galnimada in qaar ka mid ah ciidamadooda badda loo soo diro xeebaha Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan la dagaalanka burcad badeeda.
Talaabadaani ay Swedenciidamada ugu soo dirayso biyaha Soomaaliya ayaa waxaa ku baxaya lacag dhan 210 milion oo ah lacagta wadankaasi.
Barlamanka dalka Sweden waxa uu sheegay in labo todobaad gudahooda uu go’aan kaga gaarayo in ciidamo kale oo dheeri ah ay ku biiriyaan ciidamada badda ee Nato ama in ay hakinayaan qorshahaasi.
Qabiir ka tirsan Machad ku yaalla magaalada Absolla oo lagu magacaabo Mots Ottes ayaa sheegay in dadaalka uu muujinayo uu heerka uu gaaray faragalinta Soomaaliya markii u horeysay waxii ka dambeeyay burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya.
Hadii ciidamadaani badda Sweden loo soo diro Xeebaha Soomaaliya waxa ay noqoneysaa markii sadaxaad oo ciidamo ka socda dalkaasi ay ku biiraan ciidamada badda Midowga Yurub ee jooga xeebaha soomaaliya.